साउनमै करिष्माको स्टुडियोभित्र आशिष्माले खेलिन् होली ! « रंग खबर
साउनमै करिष्माको स्टुडियोभित्र आशिष्माले खेलिन् होली !
रंग खबर, काठमाण्डौं । रातको ९ बजे । सेतो कुर्ता र रातो सरवालमा सजिएकी थिइन्, नायिका आशिष्मा नकर्मी । उनलाई साथ दिँदै थिए, थारु समुदायका मोडल नरेश जोगी र उनको टिम । माहोल नै अर्कै थियो, रमाइलो थियो । सबै मान्छे सुत्ने बेलामा त्यँहा रमाइलो गरिँदै थियो । फागुन होइन, तर होली खेलिदैँ थियो । रातो अबिरसंगै रम्दै थिइन् आशिष्मा ।
शुक्रवार राती ललितपुरस्थित गोदावरीमा रहेको नायिका करिष्मा मानन्धरको स्टुडियोमा देखिएको दृश्य हो यो । तर, यहाँ कुनै ‘सेलिब्रेसन’ भइरहेको थिइन् । थारु समुदायमा चर्चित रहेको गायक टंक बुढाथोकीको थारु गीत ‘ओए लब्ली’ लाई रिमेक गरेर नेपाली भर्सनमा बनाइएको गीतको छायांकन हुँदै थियो । प्रकाश मिश्रको शब्द र टंककै संगीत रहेको गीतको भिडियो निर्देशन गोविन्द मुखियाले गर्दै थिए । थारु गीतको भिडियोलाई पनि उनैले निर्देशन गरेका थिए । यो गीतको थारु भर्सनमा नरेशलाई मोडल सुजना ढकालले साथ दिएकी थिइन् । नेपाली भर्सनमा आशिष्माले साथ दिएकी हुन् ।
राजु केसीले खिचेको भिडियोमा कोरियोग्राफी रुपेश उप्रेतीले गरेका छन् । विहान ६ बजेबाट शुरु भएको छायांकन रातको दुई बजे सकिएको निर्देशक मुखियाले बताए । ‘भिडियोमा नयाँ स्वाद दिने प्रयास स्वरुप छायांकन गरेका छौँ । चाँडै रिलिज गर्नेछौ’, उनले भने ।
रंगखबर, काठमाडौँ – गायिका एलिना चौहान र गायक मानसराजको स्वरमा तयार गीत ‘फुल काँडा’ सार्वजनिक
रंगखबर, काठमाडौँ – वरिष्ठ गायक एवं संगीतकार प्रेमध्वज प्रधानको निधन भएको छ । उनको बिहीबार
विक्रमको ‘ज्यानलाई भो खतरा’मा शिल्पा र रविन्द्र ~ भिडियो
रंगखबर, काठमाडौँ – गायक बिक्रमजंग शाहले नयाँ गीत ‘ज्यानलाई भो खतरा’ सार्वजनिक गरेका छन् ।
यस्तो बन्यो ‘छक्का पन्जा मिडिया’को होली गीत ~ भिडियो ~
रंगखबर, काठमाडौँ – आइतबारबाट यस वर्षको होली विधिवत रुपमा सुरु भएको छ । वसन्तपुरस्थित गद्दी बैठक